बालुवाटारबाट भीम रावललाई ज्यान लिने धम्कि, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ? - नेपाल घटना
बालुवाटारबाट भीम रावललाई ज्यान लिने धम्कि, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ?
प्रकाशित : २९ पुष २०७६, मंगलवार ११:२१
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले आफूलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने मान्छेबाट ज्यान मार्ने धम्की आएको बताएपछि नयाँ वहस सुरु भएको छ।
विवाद बढ्दै जाँदा रावलले आफू जेलमा हुँदा सूर्य थापा भर्खरको बच्चा भएको प्रसंग सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। पुस १४ गते राति ९ः ४४ बजे रावलका दुई कविताको फोटो राख्दै स्टाटस लेखेका थिए।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले भने रावलको भनाइ मन्त्री हुन नपाएको आक्रोश भएको बताएका छन्। मैले उहाँले कविता लेखेको प्रसंगमा त्यो कुरा उल्लेख गरेको हो। यही विषयलाई लिएर ज्यान मार्ने धम्की आयो भन्नुभएछ। गृह र रक्षा मन्त्री भइसकेको व्यक्ति जसले कार्यविधि मिचेर अगाडि-पछाडि सुरक्षाकर्मी लिएर हिँडिरहेको छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई कसले धम्की दिन्छ होला’ ? थापाले भने, ‘बालुवाटारबाट कसैले धम्की दिएको छैन। धम्की दिनु पनि हुँदैन। यो सबै मन्त्री नपाएको रिस पोख्नुभएको हो।’